Mananara Nord Info. About. What's This?
ⓘ Mananara Nord
Mananara Nord dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Mananara Nord, Faritanini Toamasina. Ny isam-poniny dia 30004 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 30401 ary ny kaodin-distrika dia 304
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia vanille. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia girofle. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia cafe. Ny isanomby dia 995. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vanille. Ny entana lafo vidy indrindra dia girofle. 5 isan-jatonny tanimbary no voatondraka aminny tohidrano na paompy. 50 ny mponina no miasa tany. 10 ny mponina no miasa aminny fanjonoana. 40 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 325 no isanny kisoa.
Misy masoivohonny banky. Misy seranam-piaramanidina akaikinilay tanàna. Tongavanny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Misy seranana an-dranomasina ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isanandro any. Ijanonny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa lise. Andalovanny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatraminny 50. Ahitana seranana an-drenirano aminilay tanàna. Ahitana kolejy ao aminilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara maivana base. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 48 ora. Ahitana lalana godorô ao aminny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 48 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 150000 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 150000 Fmg.
40 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 10 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 50 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 9. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 20. Ahitana polisy ao aminilay kaominina. Ahitana zandary ao aminilay kaominina. 3 no isanireo mpamono olona tratra tanatinny taona 1999-2001.
Wikipedia: Mananara Nord